कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: वाद र विवाद
वाद र विवाद
नेपालमा ‘वाद’ र ‘विवाद’ प्रतिस्पर्धा छ जसका कारण नेपालीहरु पनि वादविवादमा फसेको छ । यहाँ माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, समाजवाद, पूँजीवाद, साम्यवाद जस्ता राजनीतिक दर्शनहरु व्याप्त छन् र नेपालका राजनीतिक दलहरु पनि ती वादकै आधारमा राजनीति गरिरहेका छन् ।
कुनै दलहरुले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई अङिगकार गरिरहेका छन् त कुनै दलले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाएका छन् कसैले जननेता वि.पि. को समाजवादलाई आफनो सिद्धान्त बनाएका छन् । आजभोलि ती वादहरु र सिद्धान्तको कुनै विवाद छैन मात्र प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा विवाद छ । सरकार कसले चलाउने भन्नेमा विवाद छ । नयाँ नेपाल यसरी बनाउँ भन्ने विवाद छैन । नयाँ संविधान कसरी बनाउँ भन्नेमा विवाद छैन । मात्र के मा विवाद छ भने कसको सरकारमा को जाने वा को नजाने भन्नेमा विवाद छ र निर्वाचनमा कसरी आफु जित्ने भन्नेमा चिन्तामा छ ।
आखिर यहाँ माक्र्सवाद के हो यो नेपालको सन्दर्भमा कसरी लागु हुन्छ ? लेनिनवाद भनेको के हो ? लेनिनवाद कहाँ कहाँ लागु भएको छ ? माओवाद के हो ? माओवाद किन भयो ? नेपालमा माओले भनेको विचारहरु कुनकुन लागु भएको छ ? या माओका विचारलाई साच्चै लागु गरेका छन् या दुरुपयोग गरेका छन् ? नेपालमा क्रियाशिल दलहका कार्यकर्ताहरुले वादहरु कतिको बुझेका छन् र व्यवहारमा लागु गरेका छन् त ? प्रश्न धेरै छन् ।
आखिर दुईचार जना नेताहरुले जतिसुकै वाद लागु गर्न खोजेमा पनि नेपाली जनताले ती वादहरु बारे कुनै चासो दिएका छैनन् । मात्र के हो भने कुन दलमा बसेर के भयो ? दलले कति सहयोग ग¥यो ? कुन दलका कार्यकताहरुले बढी जागीर खाए या कुन दलले जनतालाई कति दुःख दिए भन्ने आधारमा मात्र दलहरुको मुल्याङकन गरेको पाइन्छन् । वाद आफैमा नराम्रो छैन सिद्धान्त आफैमा नराम्रो होइन तर वाद र सिद्धान्त एकातिर व्यवहार अर्काेतिर हुँदा नेपाली जनताले धेरै दुःख पाएका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, माओ विचारधारा, लगायत विश्वमा कम्युनिष्ट भइ गरेका प्रगतिहरुलाई आफनो हतियार मानेका छन् । तर कम्युनिष्ट मन नपर्ने विकसित पूजीवादी देशहरु जसरी पनि आफनो विस्तारवाद र साम्राज्यवाद लागु गर्न चाहन्छन् । विश्वमा पूँजीको आधारमा आफनो प्रभुत्व लाद्न चाहन्छन् । सन्दर्भ जोडौ अव एकिकृत माओवादीको सातौ महाधिवेशन र सशस्त्र युद्धको विर्सजन र एमालेकरण कुरासँग ।
अवदेखि उसको नजरमा नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशबाट पार भइ पूँजीवादको विकास गर्न कार्यकर्तालाई उत्पादनमा लगाउने, भारतिय विस्तारवादको ठाउँमा भारतिय मित्रवादको संज्ञा दिनु ।
अमेरिकन साम्राज्यवादको ठाउँमा अमेरिकन पूँजीवादलाई सहर्ष स्वीकार्नुले अव एमाओवादी पनि भारत र अमेरिकाको पूजीसंग आफनो व्यक्तिगत र पार्टीगत पहुँच पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले अव वाद र विवाद केही हैन पूँजी नै सवथोक हो । आज नेपाली जनतालाई चेतना भया ।